फ्लेक्सिबल भएकाले म कुर्ता सुरुवाल लगाउँथे - गाईजात्रा - प्रकाशितः भाद्र १५, २०७२ - साप्ताहिक
फ्लेक्सिबल भएकाले म कुर्ता सुरुवाल लगाउँथे
किरण केसी, रातामकै
बाँदरले पनि मान्छेले जस्तै बोल्न थाल्यो भने के होला ?
कलियुगमा हरेक कुरा विपरीत हुन्छ भन्छन् । ए अब कलिले छोएछ भन्ने मान्छु ।
गुडिरहेको सवारी साधनको चक्का फुस्कियो भने ?
दुर्घटना हुने निश्चित हुन्छ, म ठिकै भएभने अर्को चक्का फिट गरेर हिँड्छु, दुर्घटना भएर हिँड्न नसक्ने भए अरुले अस्पताल लैजालान, साधारण चोट लाग्यो भनें चाहिँ म आफैं हस्पिटल पुग्छु ।
चश्मा नबनेको भए के हुन्थ्यो ?
पावरवाला चश्मामा हिड्नेहरू रातमा रतन्धोको सिकार हुन्थे, रतन्धोको सिकार भैसकेपछि रात्री जीवन ध्वस्त हुन्थ्यो, रात्री जीवन ध्वस्त भएपछि रेस्टुराँ चल्ने थिएनन्, रेष्टुरेन्ट नचलेपछि मदिरा र मासु पनि चल्ने थिएनन् । अनि रेस्टुराँ व्यवसायीले साहूलाई घर भाडा तिर्न सक्ने थिएन्, हेर्नुस् त चश्माको पावर ।
मन्दिरबाट निस्कँदा जुत्ता–चप्पल गायब भयो भने ?
म पनि अर्काको राम्रो जुत्ता छानेर टाप कस्छु, इँटको जवाफ पत्थरले दिने भनेको यही हो ।
बिजुलीका खम्बा नभएको भए कुकुरको किड्नी फेल नै हुन्थ्यो । कुकुरका लागि पिसाब फेर्ने भरपर्दो स्थान भनेकै बिजुलीको खम्बा हो होइन भने कुकुरलाई पिसाब नै आउँदैन ।
युवतीको गालालाई किन स्याउसँग तुलना गरिएको ?
१७ देखि २५ वर्षको उमेरमा यौवन आएर बस्ने भएकाले युवतीको गाला स्याउ जस्तो देखिन्छ अनि त्यो गालाले पुरुषहरूलाई नजर लगाउन बाध्य बनाउँछ ।
महिलाहरूले एकहप्ता नबोल्ने व्रत बस्नुपर्ने भयो भने ?
पृथ्वीका लोग्नेमान्छेहरूलाई हाइसन्चो हुन्थ्यो ।
साताको एक दिन महिलाले लगाउने पहिरन पुरुषले लगाउनुपर्ने नियम आयो भने के लगाउनुहुन्छ ?
म कुर्ता सुरुवाल लगाउँथे । कुर्ता सुरुवाल फ्लेक्सिबल भएकाले, जहाँ पनि थचक्क बस्न मिल्छ ।